Behcet\_'s Syndrome (Behcet ရောဂါလက္ခဏာစု) - Page 31 of 58 - Hello Sayarwon
Behcet's Syndrome (Behcet ရောဂါလက္ခဏာစု)
Behcet’s Syndrome (Behcet ရောဂါလက္ခဏာစု) ကဘာလဲ။
Behcet ရောဂါလက္ခဏာစုဆိုတာ သွေးကြောတွေ ရောင်ရမ်းတဲ့ အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ခန္ဓါ အစိတ်အပိုင်း အတော်များများမှာ ပြသနာဖြစ်စေပါတယ်။ ရောဂါဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်းကို မသိရပေမယ့် ရောဂါပေါင်းစုံကြောင့် စနစ်ပေါင်းစုံ ထိခိုက်ရောင်ရမ်းတဲ့ ပြသနာလို့ သိထားကြပါတယ်။ နောက်ဆက်တွဲပြသနာတွေ၊ ရောဂါလက္ခဏာတွေဟာ ပထဝီအနေအထားအရ အမျိုးမျိုး ကွဲပါတယ်။
Behcet’s Syndrome (Behcet ရောဂါလက္ခဏာစု) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
အမေရိကမှာ ရှားပါးပြီး အရှေ့အလယ်ပိုင်းနဲ့ အာရှမှာ တွေ့ရများပါတယ်။ အသက် ၂၀-၃၀ အရွယ်မှာ အဓိက ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒီရောဂါလက္ခဏာတွေ ပေါ်လာဖို့ လနဲ့နှစ်နဲ့ချီပြီး ကြာတတ်တာကြောင့် ရောဂါရှာဖွေဖို့လည်း ကြာမြင့်တတ်ပါတယ်။
Behcet’s Syndrome (Behcet ရောဂါလက္ခဏာစု) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
တယောက်နဲ့တယောက် မတူနိုင်ပါဘူး။ သူ့ဖာသာပျောက်ကွယ်သွားပြီး ပြန်လည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အချိန်ကြာလာရင် ပြင်းထန်မှု လျော့လာတတ်ပါတယ်။ ဘယ်နေရာမှာ ဖြစ်တယ်ဆိုတာပေါ် မူတည်ပြီး လက္ခဏာတွေ ကွဲပြားပါတယ်။ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ပါးစပ်။ ပါးစပ်ထဲမှာ မှိုစွဲနာနဲ့ဆင်တူတဲ့ အနာတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အကွင်းလိုက်ဖြစ်တတ်ပြီး နာကျင်တဲ့ အနာတွေအဖြစ် ပြောင်းသွားနိုင်ပါတယ်။ ပြန်ဖြစ်တတ်ပေမယ့် တပတ်ကနေ ၃ပတ်အတွင်း ပျောက်သွားတတ်ပါတယ်။
အရေပြား။ အရေပြားပြသနာလည်း အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ တချို့မှာ ဝက်ခြံနဲ့ဆင်တူပါတယ်။ တခြားတွေ့ရတတ်တာကတော့ အနီဖုတွေ ပုံစံဖြစ်လာပြီး နာနေတတ်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ခြေထောက်မှာ တွေ့ရများတတ်ပါတယ်။
လိင်အင်္ဂါ။ လိင်အင်္ဂါမှာ အနာပေါက်နေတတ်ပါတယ်။ ကပ္ပယ်အိတ်၊ မိမ်းမကိုယ် အပြင်ပိုင်း စတာတွေမှာ တွေ့ရများပါတယ်။ နာတတ်ပြီး အမာရွတ်တွေ ကျန်တတ်ပါတယ်။
မျက်စိ။ မျက်လုံးရောင်တတ်ပါတယ်။ နီရဲပြီး အမြင်ေဝဝါးတတ်ပါတယ်။ ပေါ်လိုက်ပျောက်လိုက် ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
အရိုးအဆစ်များ။ အဆစ်ရောင်ပြီး နာခြင်းကို ဒူးဆစ်မှာ အများဆုံး တွေ့ရပါတယ်။ ခြေကျင်းဝတ်၊ လက်ကောက်ဝတ်၊ တံတောင်ဆစ်တွေမှာလည်း တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ တပတ်-၃ပတ်လောက်မှာ ပျောက်သွားတတ်ပါတယ်။
သွေးကြောစနစ်။ သွေးကြောတွေရောင်ပြီး သွေးခဲဖြစ်ပေါ်ရင် လက်နဲ့ခြေထောက်မှာ နီရဲနာကျင်ပြီး ရောင်ရမ်းတတ်ပါတယ်။ ကြီးမားတဲ့ သွေးလွှတ်ကြောတွေမှာဖြစ်ရင် သွေးကြောထုံးခြင်း၊ သွေးကြောပိတ်ခြင်းတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
အစာခြေစနစ်။ ဗိုက်အောင့်ခြင်း၊ ဝမ်းလျှောပြီး သွေးပါခြင်းတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ဦးနှောက်။ ဦးနှောက်နဲ့ အာရုံကြောစနစ်တွေ ရောင်ရမ်းနိုင်ပြီး ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ဖျားခြင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်ကို မသိခြင်း၊ ကောင်းစွာမရပ်နိုင်ခြင်း၊ လေဖြတ်ခြင်း စတာတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Behcet’s Syndrome (Behcet ရောဂါလက္ခဏာစု) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
တိကျစွာ မသိရသေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် မိမိကိုယ်ခံအားက ပြန်လည်တိုက်ခိုက်တဲ့ရောဂါလို့ ယူဆကြပါတယ်။ မျိုးရိုးဗီဇနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ကိစ္စတွေဟာ အဓိကကျပါတယ်။
ဒီရောဂါနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ မျိုးရိုးဗီဇတွေကို တွေ့ရှိရပါတယ်။ ရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ ဗီဇရှိသူတွေဟာ ဘက်တီးရီးယား၊ ဗိုင်းရပ်စ် စတဲ့ရောဂါပိုးတွေနဲ့ ထိတွေ့ရင် ရောဂါဖြစ်စေဖို့ လမ်းပွင့်သွားတယ်လို့ သုတေသီတွေက ယူဆကြပါတယ်။
ငါ့ဆီမှာ Behcet’s Syndrome (Behcet ရောဂါလက္ခဏာစု) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာ်တွေက မြင့်တက်စေသလဲ
အသက်အရွယ်။ ကလေးတွေနဲ့ လူကြီးတွေမှာလည်း ဖြစ်တတ်ပေမယ့် အသက် ၂၀-၃၀ကြားမှာ အဖြစ်များတာကို တွေ့ရပါတယ်။
နေထိုင်သည့်နေရာ။ အရှေ့အလယ်ပိုင်း (တူရကီ၊ အီရန်)၊ အရှေ့ဖျားနိုင်ငံများ (ဂျပန်၊ တရုတ်) စတာတွေမှာ ပိုပြီးဖြစ်တာ များပါတယ်။
ကျား/မကွဲပြားမှု။ အမျိုးသားရော အမျိုးသမီးများပါ ဖြစ်တတ်ပေမယ့် အမျိုးသားတွေမှာ ပိုပြင်းထန်တတ်ပါတယ်။
မျိုးရိုးဗီဇ။ တချို့မျိုးရိုးဗီဇဟာ ပိုပြီးဖြစ်နိုင်ခြေ များပါတယ်။
Behcet’s Syndrome (Behcet ရောဂါလက္ခဏာစု) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
တိကျစွာ အတည်ပြုနိုင်မယ့် စစ်ဆေးမှုတွေ မရှိပါဘူး။ ရောဂါလက္ခဏာပေါ် မူတည်ပြီး ခန့်မှန်းပါတယ်။ တခြားအခြေအနေတွေကို ဖယ်ထုတ်နိုင်ဖို့ သွေးစစ်ခြင်းနဲ့ တခြားဓါတ်ခွဲစစ်ဆေးခြင်းတွေ ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
အောက်ပါအခြေအနေတွေကုလည်း ရောဂါအတည်ပြုဖို့ စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။
ပါးစပ်အနာ။ ရောဂါအတည်ပြုဖို့ လိုအပ်တဲ့ အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ တနှစ်အတွင်း ၃ခါလောက် ပြန်ဖြစ်ရင် ရောဂါအတည်ပြုဖို့ သတ်မှတ်ချက်ထဲ အကျုံးဝင်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် အောက်ပါအခြေအနေမှလည်း အနည်းဆုံး ၂ခုရှိရပါတယ်။
အရေပြားအနာ (ဝက်ခြံနဲ့ ဆင်တူပါတယ်)
Pathergy စစ်ဆေးခြင်း။ ပိုးသတ်ထားတဲ့အပ်ကို အရေပြားထဲထိုးထည့်ပြီး ကိုယ်ခံအားစနစ်က တုံ့ပြန်မှုရှိမရှိ စစ်ဆေးခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
Behcet’s Syndrome (Behcet ရောဂါလက္ခဏာစု) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
အရေပြားလိမ်းဆေးခရင်မ်များ၊ လိမ်းဆေးများ လိမ်းခြင်း။ စတီးရွိုက်လိမ်းဆေးများကို အရေပြားနဲ့ လိင်အင်္ဂါများမှာလိမ်းရင် ရောင်ရမ်းနာကျင်မှုကို သက်သာစေပါတယ်။
အာလုတ်ကျင်းခြင်း။ စတီးရွိုက်နဲ့ တခြားပစ္စည်းတွေ ပါဝင်တဲ့ အထူးဆေးရည်များနဲ့ အာလုတ်ကျင်းရင် အနာသက်သာစေပါတယ်။
မျက်စဉ်း။ စတီးရွိုက်နဲ့ တခြား အရောင်ကျဆေးတွေပါတဲ့ မျက်စဉ်းကို သုံးနိုင်ပါတယ်။
ပိုမိုဂရုစိုက်ဖို့လိုပါတယ်။ ရောဂါအခြေအနေ အတော်အတန်ကနေ ဆိုးရွားတဲ့အဆင့်အထိ ဆရာဝန်များဟာ အောက်ပါနည်းလမ်းတွေ အသုံးပြုတတ်ကြပါတယ်။
ကော်တီကိုစတီးရွိုက်ဆေးများ။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများအနေနဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်တက်ခြင်း၊ ရင်ပူခြင်း၊ သွေးတိုးခြင်း၊ အရိုးပွခြင်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်ခံအားစနစ်ကို နှိမ့်ပေးမည့် ဆေးဝါးများ။ မိမိကိုယ်ခံအားကနေ ကောင်းတဲ့တစ်သျှူးတွေကို တိုက်ခိုက်နေခြင်းကို ရပ်တန့်နိုင်ရင် ရောင်ရမ်းမှု ကျစေပါလိမ့်မယ်။
ကိုယ်ခံအားစနစ်တုံ့ပြန်မှုကို ပြောင်းလဲပေးသည့် ဆေးဝါးများ။ Interferon alfa-2b (Intron A) ဟာ ရောင်ရမ်းခြင်းကို ထိန်းချုပ်တဲ့ ကိုယ်ခံအားစနစ်ကို ပုံမှန်ထိန်းညှိပေးပါတယ်။ အရေပြားအနာများ၊ အဆစ်နာခြင်း၊ မျက်လုံးရောင်ခြင်း စတာတွေကို သက်သာစေဖို့ တမျိုးတည်း၊ ဒါမှမဟုတ် တခြားဆေးတွေနဲ့ တွဲသုံးနိုင်ပါတယ်။
ဘယ်လို နေထိုင်မှုပုံစံနဲ့ အိမ်တွင်းကုထုံးတွေက Behcet ရောဂါလက္ခဏာစုအတွက် အထောက်အကူ ပြုသလဲ
Behcet’s syndrome. https://en.wikipedia.org/wiki/Beh%C3%A7et’s_disease . Accessed December 27, 2016.